Uhlabahlosile umculo kaMankunku noMkhize – Bayede News
Uhlabahlosile umculo kaMankunku noMkhize
AKUSAVAMISILE ukuthola iCD okuthi noma kungeyomunxa
Posted on 25/04/2019 10/05/2019 by Bayede-News
AKUSAVAMISILE ukuthola iCD okuthi noma kungeyomunxa othile ingaxubi eminye iminxa ngenhloso yokunandisa noma ukuzivulela amathuba okudayisa kangcono ngoba ithinta imizwa yabantu abalandela izinhlobo ezehlukene zomculo.
Ngibalula amaCD eJazz amabili okungekaThemba Mkhize iThe Collection edidiyelwe ngabakwaSony BMG nekaWinston Mankunku Ngozi iDeluxe Collection edidiyelwe ngabakwaGallo.
Womabili lama-albhamu ahlanganiswe ngesineke futhi akade benza lo msebenzi babe nesiqinisekiso sokuthi wonke umculo uyijazz yize kuthakwe izingoma eziqhamuka kumaalbhamu ahlukene alaba baculi. Ngaphezulu kwalokhu kwenziwe isiqiniseko sokuthi ikhono lokudlala izinsimbi lawa maciko aziwa ngazo alisali ngaphandle. Izingoma zikaMkhize ezikhethiwe zigqamisa ikhono lakhe lokudlala upiyano, kanjalo noMankunku ku-alto netenor sax.
Umculo wejazz uphila njalo ngenxa yekhono lamaciko lokwenza into ngendlela yakho noma ukuqhamuka nesitayela ebesingalindelekile.
Lokhu kuzwakale kahle engomeni etholakala kuma-albhamu womabili futhi esisetshenzwe ngezindlela ezehlukene ngabacula ngamaphimbo nabadlala izinsimbi ethi. “La kutshon’ilanga.” Ikhono lokudlala upiyano likaMkhize livela obala qekelele kanti nesaxophone kaNgozi uyizwa kahle kule ngoma.
Okunye okwenziwe kahle kulawa ma-albhamu wukuhlanganiswa kwawo. Imisindo ilingana kahle yenze olalele azululeke nengqondo.
Okuncane okungiphoxile nge-albhamu kaMkhize iThe Collection, wukusala ngaphandle kweqoqo kwengoma esihloko sithi, ‘Inner Peace’ ayidlala ngokuhlanganyela noSbongile Khumalo kanti yona iku-albhamu yakhe iTales from the South. Impela ngife olwembiza ngokusala kwayo ngaphandle ngoba lapho uMkhize wayeludlala upiyano sengathi uphambene.
Sengikushilo lokho lawa ngama-albhamu wonke umthandi wejazz okufanele awaphuthume esenokutholakala njengoba umculo omningi usuqala ukwenqaba ukutholakala ngamaCD kodwa usutholakala kakhulu online.